यात्रा को लाभ | सडकको लागि एक युगल
यात्राको लाभ: एक स्व विकास उपकरणको रूपमा यात्रा गर्नुहोस्
मार्च 26, 2017 / एक टिप्पणी छोड
मैले उडान नगरेको छैन। वास्तवमा, मेरो जीवनमा पहिलो पटक दुई पटक मैले हवाई जहाजमा भेटें, म 16 र 22 क्रमशः थियो, निस्सन्देह, म यात्राको महत्वको बारे मा कुनै जानकारी छैन र पछि यो पछि मलाई कसरी फाइदा हुनेछ।
मलाई भोक छुट्टै लाग्न थालेको छैन, युरोपेली ग्रामीण इलाकाहरू वा यहाँ सम्म कि टेक्सासको रूपमा कति टाढाको ठाउँहरूमा क्रस-देश जंगल पनि बनाउने? हामी एक पटक गर्नुभयो, र मलाई विन्डोजस्टस्ट कि पूर्णतया पहिलो भित्ताको पछाडि धेरै जीवित महसुस गर्न सम्झना छ आफ्नै मलाई पछिल्लो वर्षमा।
संसारको हाम्रो मनपर्ने दृष्टिकोण ...
मेरा आमाबाबुले जिज्ञासा प्रदान गर्न गाह्रो काम गर्थे, र मैले पारिवारिक कार सवारी पूर्व ईस्ट टेनेसी पर्वहरूमा वा फ्लोरिडाको पनडुब्लेको प्रिन्सिन समुद्र तटमा छुट्याएको छु। तिनीहरू मेरो लागि धेरै ठाउँहरू थिए, जो पुरानो पेपर ग्लोबमा "घर" फेला पार्ने एउटा बच्चा, यसलाई 180 डिग्री घुमाउनुहोस् र त्यस बिन्दुबाट सबैभन्दा बढी के थियो पत्ता लगाउँनुहोस् र भन्नुहोस् "त्यहाँ ... म त्यहाँ केही दिन जाँदैछु।" मानौं मैले संसारमा राम्ररी राम्ररी जान्दिनँ, प्रायजसो सपना देख्नको लागि।
म भन्न सक्छु म उन "त्यहाँ" ठाउँहरूमा छु जुन मैले सपना देखेको छु। म के भन्न सक्दिन र धेरै कुरा छैन, किनकि सोही विचारले मलाई भाषण दिन्छ। म सबै ट्ररी को लागि धन्यवाद मा फिर्ता देख्छु र मैले एक साथ देखेको छु, किनभने मेरो जीवनमा धेरै लामो समय "यात्रा" एक पूर्ण पाइप-सपने जस्तो देखिन्छ।
तपाईंले एक पटक त्यो तरिका महसुस गर्नुभएको हुन सक्छ। सायद तपाईं अझै पनि गर्नुहुन्छ।
बोनेयर - जहाँ हामीले संसारमा हाम्रो मनपर्ने स्थान पार्यौं (अहिलेसम्म ...)
मलाई आश्चर्य छ कि, सबैले जस्तै आफ्नो जीवनमा क्षणहरू, ल्यान्डमेट क्षणहरू र मेरो के हुनेछ भने के मैले "बिग्रेको" गरेको थियो "सट्टा"। यो कहिले थियो जब म यात्रा को विचार संग प्रेम मा भयो? के यो सजिलो थियो? के यो त्यहाँ त्यहाँ थियो? के यो मलाई विशिष्ट देखि नै थियो? यो भन्न गाह्रो छ, किनकि मैले यात्राको बारेमा पहिलो सम्झना एक थिएन चाहनुहुन्छ वा कमी चाहान्छ, तर बरु डर। उडानमा उड्ने एउटा खराब, डराउरो डरले मेरो जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्थ्यो।
मेरो बुबा कहिल्यै यो दिनको लागि, हवाई जहाजमा उडेको छैन। मेरी आमा मात्र जीवनमा ढिलाइ भएको थियो, र कहिल्यै लक्जरी वा साहसिक कारणहरूको कारण। मेरो पहिलो उडान, वास्तवमा, हाई स्कूलको मेरो सोफोमोर वर्षको समयमा थियो। एक सम्पन्न एथलीटको रूपमा, मेरो फुटबल टोली आधिकारिक, संगठित प्रतिस्पर्धाको लागि अलास्का भ्रमण भयो। जब म चाहन्छु, म उडानको अनुभवबाट आनन्द उठाउन सक्छु, मैले निश्चित गर्नुपर्दछ छैन। अँध्यारो, म त्यहाँ मेरो सिटमा बसें। मैले मेरो भित्तामा मुटुको मोतीको गिनतीको घण्टौं एक विविधतावादी रणनीतिको रूपमा गम्भीर याद गर्छु। प्रत्येक सेकेन्ड एक मिनेट जस्तो देखिन्छ, मैले घण्टापछि खिचिएको देखेर एक घण्टा जस्तै हरेक मिनेट।
त्यसपछि जहाज वास्तवमा समाप्त भयो।
जब म सम्पूर्ण, अत्याधिक परीक्षा को दोबारा गर्न को आवश्यकता छैन, यो बिना यो जान्छ कि यो मेरो लागि एक भयानक अनुभव थियो। म स्ट्रिटज्याकेट-पागल थिएन, तर त्यसो भए त्यो विचार मन परायो कि संसार हेर्दै सम्भवतः व्यभिचारमा मेरो एजेन्डामा थिएन। हामी कस्ता अजीब मार्गहरू यात्रा गर्छौं, हामी छैनौं?
वर्षौंको लागि, मलाई उडानको विचारमा हराईयो। मैले रोजगारीबाट बच्न अद्भुत अवसर प्रस्तुत गर्ने काम छोडें। मैले सुरक्षित पथ लिनको लागि एक पटक-एक-जीवनभरको मौकामा छुटेको छु। अब, यो पागल र जस्तो देखिन्छ जस्तो कि केहि नराम्रा नर्सो-राम्रोले मेरो शरीरमाथि भरिदिएको थियो। यद्यपि, म बिर्सिन सक्दिन कि मेरो जीवनमा एक पटक, त्यो थियो me.
यो चाहनुहुन्छ यात्रा सधैं त्यहाँ थियो, र यो म भूत जस्तै मा लटका। यो बूढो भएझैं थिच्यो, र भेट्न ट्रेसी र प्रेममा बिस्तारै यो मेरो सामना गर्नु भएको थियो। उनी यात्रा गर्न चाहन्थे। म यात्रा गर्न चाहन्थें। म उसलाई चाहान्छु। मलाई मेरो डर बढाउनु पर्छ।
धेरै कुराको साथमा, मैले आवश्यक यात्राको काम लिनुभयो। मलाई भयभीत थियो। यो काम पनि "सपने को सामान" थियो, तर यो बिल भुक्तानी गरे र एक उद्देश्य सेवा - यो भय को सामना गर्न को लागी मेरी जुनून पकडा थियो, मेरी चाहान्छ र मेरो को लागी कुनै व्यक्तिको नजिक हुन सक्ने क्षमता प्रेममा पसेको थियो।
पहिलो केही उडानहरू भयानक थिए, तर मैले एक तरिकाको अनुकूलन गरेको थियो कि एक भाग ब्रेज / एक-भाग हेडफोन्स र मेरो आतंकको सामना गर्न दुई-भागहरू डर थियो। जब म उडान नगर्ने, एक मानक काम हप्ताको लगभग आधा घण्टा थियो, मैले आफ्नो समय-समय लिएर कार सुरक्षा यात्रा, र असंख्य अन्य तथ्याङ्कहरू बनाएको छु जुन मैले विश्वास गर्न थाले। मेरो डर केहि हानिकारक थियो।
मेरो डर कम भयो, तर केवल मार्जिनमा। अलि असाध्यै, डरले गर्दा यो पूर्ण र अचानक तोड्यो। मलाई पल सम्झन्छ, "पहिलो" विमानमा मेरो पहिलो उडान (दुई अगाडि प्रोभेलरद्वारा संचालित एक सानो हवाई जहाज) र मैले पहिलो पटक थियो अनुपस्थिति तंत्रिका। त्यहाँ केही उपस्थित थिए, तर पहिले जस्तो केहि पनि छैन।
आर्द्र, ओभरटेस्ट फ्लोरिडा दोपहर विमानस्थलमै लुट्यो किनभने यो आकाशमा घृणा गर्दछ - र त्यसो भयो। पहिले विमान को हिला, तब एक झटपट, फेरि फेरि स्थिर। त्यसपछि अर्को झण्डा मैले मेरो डरमा पर्खें ... केहि पनि छैन। अर्को झण्डा "मेरो खुट्टामा पसीनाको छैन," मैले सोधे। Jtt। हल्लाउनुहोस्। Veer।
केही पनि छैन। सास फेर्न, र मेरो कानुनी खेलाडीको आवाज मेरो कानमा बजाउँदै एउटा गीत जुन मेरो जीवनमा यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणको प्रतीक हो - "मेरो ईश्वर सूर्य" स्टोन युगको क्वीन्सले। कोरसले हिउँदको अन्तिम चिसो भन्दा माथिको प्रकोप विमानको रूपमा हिटयो, पोर्ट-साइडले एक थोपा थोपा बनायो र जस्तो कि यदि मेरो भन्दा भन्दा बढी केहि केहि निश्चित भयो भने सुन्दर दोपहरको सूर्यले मलाई तल छोयो। सेटिङ, हराइरहेको छ। मेरो डर जस्तो।
यात्रा शायद छ को अझ राम्रो प्रभावकारी तरिका, तपाईलाई सहयोग गर्ने को लागी तपाई को हुनुहुन्छ। यो मेरो लागि गर्नुभयो, र यदि यो तपाईंको लागि अझै सम्म छैन, यो हुनेछ। मेरो परिस्थितिमा मैले उल्लेख गरेको छु, यात्राले तपाईंलाई डर हटाउन सहयोग गर्दछ। हाइट्सको डर। उडानको डर। अजीब खानाको डर, र विभिन्न संस्कृतिका मान्छे। त्यहाँ छ no डर यात्राले तपाईंलाई पराजित गर्न सक्दैन, र केहि दूरस्थ स्थानमा यात्रा गर्ने लाभ र जुन अनुभव कहिल्यै नदेखेको अनुभवले आँखा खोलिरहेको छ। संसारलाई हेर्नको लागी मात्र प्रलोभन, टाढा-टाढा ठाउँहरूमा पुग्न धेरैले हावाको सावधानी छोड्न र तिनीहरूको आन्तरिक-सबैभन्दा साहसी व्यक्तिको लागी बुझ्न पर्याप्त छ। यो शाब्दिक चल्छ तिमी।
यात्रा पनि सांस्कृतिक रूपले तपाईंलाई परिवर्तन गर्दछ। विशेष गरी पश्चिममा, हामी विश्वव्यापी सम्वन्धित सांस्कृतिक बुलबुलेमा बाँच्न चाहन्छौं जसले संसारको हाम्रो दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन सक्दैन। पर्वतमा पर्ने शहरको कस्कोको सानो घरहरुमा पहाडको टुप्पोबाट तल हेर्दै तपाईलाई परिप्रेक्ष्य दिनुहुन्छ। विदेशी भाषामा कसैसँग बिच्छेद गरिएको कुराकानी गर्न संघर्ष गर्न तपाईंलाई खुल्यो। तपाईं प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तपाईं सहनशीलता सिक्नुहुन्छ। तपाईं जान्दछन् कि संसार सरल छ कि तपाईं मात्र छ यसलाई प्रेम गर्न।
तपाईले लाभ उठाउने अर्को तरिका, र धेरैले यो बिर्सनु हुन्छ, त्यो हो यात्राले तपाईंलाई दिने मौका दिन्छ। एक विदेशी देशमा उदार भएर, अजनबीसँग कुरा गर्न र उनीहरूको परम्पराको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न र उनीहरूको विषयमा के कुराको बारेमा जान्नको लागि तपाईंको ध्यान दिइरहनुभएको छ, तर यात्रा तपाईंको प्रयासमार्फत दिनहुँ अविश्वसनीय तरिका हो। मिशन भ्रमण, मानवअधिकार सहायता र पशु अधिकारले गर्दा सबैले यात्राको साथ प्रायः सम्बद्ध गराउँछ, र अवसरहरू दिन दिन्छन् दिनु सट्टामा प्राप्त जब तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ।
यात्रा यो सबै र अधिक। यसले तिमीलाई साहसी बनाउँछ। यसले तपाइँलाई एक रमाइलो व्यक्ति बनाउँछ, र तपाइँलाई कुरा गर्न र अरूसँग साझेदारी गर्न थप दिन्छ (केवल तपाइँ कति यात्रा गर्नुहुन्छ कि नराम्रो होस्)।
यदि तपाइँ यसलाई दिनुहुनेछ भने, तपाईं अन्वेषण गर्न तपाईंको इच्छुकता द्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आफैलाई अरू अरुलाई भेट्नुहोस्, र त्यसो गरेर, आफैलाई भेट्नुहोस्।
श्रेणी: युगल यात्रा, स्व सुधार, एकल यात्रा टैग: उडानको डर, आत्म-सहयोग, यात्रा
← समीक्षा: क्लिफ मोर डे-ट्रिप
म्यूनिखमा के गर्ने →